बजेटको आकारमा संशोधन किन ? – Maitri News
बजेटको आकारमा संशोधन किन ?
काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आम्दानी र खर्चमा संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित चालू आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आम्दानी र खर्चमा संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
Previous Previous post: विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त
Next Next post: गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउण्डेशन अमेरिका च्याप्टरले बिभिन्न संघ(संस्थाहरुसॅंग सहकार्य गर्ने